‘ऐश्वर्य’को सुखद ओपनिङ, फिल्मको मेकिङको चौतर्फी प्रशंसा « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
‘ऐश्वर्य’को सुखद ओपनिङ, फिल्मको मेकिङको चौतर्फी प्रशंसा
प्रकाशित मिति : २०७४, ११ कार्तिक शनिबार
बिहिबार छठ पर्वको बिदाको मौका छोपेर रिलिज भएको चलचित्र ‘ऐश्वर्य’ले पहिलो दिन सुखद कलेक्शन गरेको छ । चलचित्रको वितरक कम्पनी डीसीएनले दिएको आँकडा अनुसार, यो चलचित्रले काठमाण्डौमा २८ लाख ८६ हजार १०७ रुपैयाँको ग्रस कलेक्सन गरेको छ भने मोफसलमा १९ लाख ३० हजार ५७५ को ब्यापार गर्न सफल भएको छ । चलचित्रले पहिलो दिन ४८ लाख १६ हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ बराबरको ग्रस कलेक्शन गरेको छ ।
बिहिबार काठमाण्डौका मल्टिप्लेक्समा दर्शकको उपस्थिती उच्च देखियो । बिहानैबाट मल्टिप्लेक्समा दर्शक चलचित्र हेर्न पुगेका थिए । चलचित्रका नायक तथा निर्माता रमेश उप्रेती, नायिका दीपिका प्रसाई, खलनायक प्रशान्त ताम्राकार र निर्देशक दिवाकर भट्टराइले दर्शकसँगै बसेर चलचित्र हेरे ।
चलचित्र हेरिसकेपछि अधिकांश दर्शक नायक रमेश उप्रेती र खलनायक प्रशान्त ताम्राकारसँग सेल्फी खिच्न झुम्मिएका थिए । केही दर्शकले रमेशले चलचित्र क्षेत्रमा कमब्याक गरेको भन्दै वधाई समेत दिएका थिए । चलचित्रले सुखद व्यापार गरेपछि नायक रमेश उप्रेती निकै खुशी देखिएका छन् ।
उनले, आफूले चाहेको किसिमको चलचित्र बनेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । चलचित्रको मेकिङ, कलाकारको अभिनयलाई सर्वाधिक धेरै दर्शकले रुचाएका छन् । यस्तै, दर्शकबाट आएको प्रतिक्रियाले कलाकार प्रशान्त ताम्राकार पनि दंग देखिएका थिए । उनले, धेरै दर्शक टिकट नपाएर फर्किएको भन्दै दर्शकको मायाले उत्साह बढाएको बताए ।
नायिका दीपिका प्रसाइले डेब्यू चलचित्रमै दर्शकबाट पाएको मायाले आफूलाई अगाडि बढ्न हौसला मिलेको बताइन् । निर्देशक दिवाकर भट्टराइले दर्शकले दिएको मायाले आफूलाई झनै जिम्मेवारी वोध भएको बताए । १ करोड भन्दा माथिको बजेटमा बनेकाले पनि चलचित्रले लगानी उठाउनका लागि मात्र केही दिन आक्रामक व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
Es gibt auch eine reihe von selbsthilfegruppen, in denen sich menschen, die suchtmittel einnehmen oder best-ghostwriter.com/referat eingenommen haben, treffen.
सुरज लामिछानेको ‘पानी कुलाको’ सार्वजनिक
काठमाडौं २ जेठ : कलाकार सुरज लामिछाने र पार्वती सुवेदीको आवाजमा रहेको पानी कुलाको बोलको
बजारमा ‘धनले कसलाई पुग्छ…’
कलाकार, गायक, गीतकार, निर्देशक कमल दाहालको निर्देशनमा नविनतम गीत ‘धनले कसलाई पुग्छ… ’ हालै युट्यूबमा
विमलाको ‘ए सानु’
आफूलाई साहित्यकारको रुपमा समेत चिनाउन सफल अहिलेका चर्चित गीतकार विमला हुमागाई आफ्नो नविनतम गीत “ए